अस्पतालमा बिरामीहरु कुरेको कुरै - Saptakoshionline
अस्पतालमा बिरामीहरु कुरेको कुरै
प्रकाशित मिति: बुधबार, भाद्र ०६, २०७५ समय: ५:४६:०४
इनरुवा । सुनसरी सदरमुकाम इनरुवाको जिल्ला अस्पताल इनरुवाका प्रमुख समेत निजी क्लिनिकमा धाउन थालेपछि विरामीहरुले आक्रोस पोखेका छन् । अस्पतालमा आर्थिक हिनामिनाको घटना सेलाउन नपाउँदै चिकित्कसहरु र अस्पतालका प्रमुख समेत निजी क्लिनिकमा धाउने गरेकाले विरामीहरुले आक्रोस पोखेको घटना बाहिर आएको छ । इनरुवा अस्पतालकी प्रमुख रहनु भएकी मेडिकल सुप्रिडेण्ट डाक्टर बिना शाक्य माथि समेत सरकारी अस्पतालको साटो क्लिनिकमा बढी समय बिताउने गरेको आरोप बाहिर आएको छ । मेसुका रुपमा इनरुवा अस्पतालमा नियुक्ति पाउनु भएकी शाक्य उपर अस्पतालमा उपचारकालागि पुगेका बिरामीहरुले त्यस्तो आरोप लगाएका हुन् । अस्पतालबाट भिडियो एक्स–रे सेवा लिन पुगेकाहरुले उपचार सेवा लिन घण्टौं कुर्नु पर्ने अवस्था रहेको सेवाग्राहीहरुले बताएका छन् । स्थानीय रोहित निरौलाले उपचारका लागि अस्पताल पुग्दा डा.शाक्य क्लिनिकमा ब्यस्त रहेको पाइएको बताए । निरौलाले भिडियो एक्स– रे का लागि पुर्जि काटेर सेवा लिन लामो समय पर्खनु परेको सुनाए ।
उनले जस्तै कलादेवी यादवले समेत प्रमुखको स्वास्थ्य र एक्स रे सेवा पाउन नसेको गुनासो सुनाए । ड्युटी समय भर अस्पताललाई समय दिनुपर्ने डा. शाक्यले बढी समय निजी क्लिनिकमा बिताउने गरेको स्वयं अस्पतालका कर्मचारीहरुले बताएका छन् । सरकारी अस्पतालको कर्मचारी भएर कार्यालय समयमा नै निजी क्लिनिक धाउने गरेको भन्दै यसअघि समेत डा. शाक्यले सो किसिमको आरोप झेल्दै आउनुपरेको छ । उता डा. शाक्यले अस्पतालमा बिरामी नभएको अवस्थामा क्लिनिकमा बिरामी आए समय अनुकुल मिलाएर आफुले चेकजाँच गर्ने गरेको भएपनि अस्पताल भन्दा क्लिनिकलाई प्राथमिकता दिएको भन्ने प्रसंगलाई इन्कार गरेका छन् । अस्पतालमा बिरामीलाई नकुराएको र बिरामी उपस्थित भएको पाउनासाथ सेवामा उपस्थित हुने गरेको शाक्यको भनाई छ । यद्दपी स्वयम अस्पतालकै स्वाथ्यकर्मी र कर्मचारी भने मेसुलाई पटक–पटक जानकारी गराउँदा समेत बेवास्ता गर्ने गरेको बताउँछन् ।